कोरोना जीवित पार्टी भन्दै संक्रमण जितेर उत्सव मनाउदा यी महिलालाई पर्यो…फसाद..! – Gorkhali Dainik
October 4, 2020 619
काठमाडौं । कोरोना महामारीलाई जितेर उत्सव मनाउनु एक महिलाका लागि निक्कै महंगो सावित भएको छ । कोभिड–१९ लाई जीवित पार्टीको रूपमा मनाएपछि एक महिलालाई निक्कै ठूलो चेतवानी आएको छ ।
जेसिका गाम्ब्रा नाम गरेकी यी युवतीले पार्टी आयोजना गरेपछि उनको सर्वत्र बिरोध मात्र भएन उनलाई नै बाँकी नराख्ने चेतवानी आएको छ । तर उनी जोड दिन्छिन् कि सबै प्रकारका सामाजिक सुधारका उपायहरू अबलम्बन थियो, किनकि उनी टोस्टमा स्पष्ट थिइनन् ।
विवाह लगायतका विशेष उत्सवहरुको आयोजना गर्ने २७ वर्षीय व्यक्तिले उनलाई र उनको परिवारलाई कोरोनोभाइरसद्वारा मृत्यु गराइनेछ भनेर बिरामीलाई पठाएको सन्देश पाएका थिए ।
व्यवसायीले भने कि उनले कडा सुरक्षाका उपायहरु अपनाएको भिडियोहरु अनलाइनमा साझेदारी गरिसके पछि पनि बाँकी नराख्ने चेतावनी आएको हो ।
अब जेसिका दावी गर्छिन् कि उनी त्यस्तै पार्टी चाहने मानिसका लागि बुकिङ थालिएको थियो । अर्कोतर्फ उनको सामाजिक मिडिया प्रोफाइलले उत्सव पछि हजारौं थप फलोअरहरू प्राप्त गर्‍यो । ब्राजिलको उत्तरपूर्वी क्षेत्र पेरिबा राज्यमा भिडियो र फोटोहरूसहित सप्ताहन्तको अन्तमा पोष्ट गरिएको ग्लाउबर्स कार्यक्रम क्याबाल्डोको समुद्री किनारमा मनाईयो ।
उनले भनिन्, ‘उनलाई विश्वास छ कि उनी आफ्नो दुई वर्षको छोराबाट संक्रमित भइन् र केही दिन पछि यस रोगको पुष्टि भयो ।’ उनको सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएको एक भिडियोमा, उनले समुद्री तटको बालुवामा पार्टीको वातावरण देखाइन् ।
उनको सोशल मिडियामा बिभिन्न भिडियोहरूले ग्यारेन्टी गरिन् कि उसले पार्टीमा १०० जना भए पनि सबै सावधानिका उपायहरु पछ्याइरहेको छ ।
यहाँ आइपुग्दा, अतिथिहरूले तिनीहरूको तापक्रम जाँच गरेका थिए । बुफेले डिस्पोजेबल प्याकेजिङमा विभिन्न अंशहरू प्रदान गर्थे । दिशानिर्देशहरूमा स्यानिटाइजरको प्रयोग र आवश्यक पर्दा मास्कको प्रयोग पनि समावेश गरेको थियो ।
टेबल दुई मिटर टाढा थियो र पाहुनाहरूलाई प्लास्टिक र थैलीहरू खाका र पेय पदार्थहरूको उपभोग गर्दा मास्क लगाउन दिइन्थ्यो । गामराका अनुसार जो दुलहीको मेलालाई पनि बढावा दिन्छन्, कुनै अथितीले कोभिड–१९ को कुनै लक्षण देखा परेको छैन ।
तर उनले भने कि सावधानीको बाबजुद पनि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको घोषणा गर्ने बित्तिकै आलोचना हुन थाल्यो । उनका अनुसार, केहि धेरै व्यक्तिहरू, जस्तै व्यक्ति आफ्नो परिवारको मृत्यु चाहन्छन्, वा उनीहरूका पाहुनाहरूलाई कोभिड–१९ हुन्छन् ।
साथै ‘तपाईलाई अरुप्रति सहानुभूति छैन’ वा ‘तपाई एक व्यर्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ । जस्ता कमेण्टहरुको ओइरो लागेको थियो ।’ व्यापारीले भने कि उनी आलोचनाबाट दुःखी र विचलित भएको महसुस गर्छिन्, तर अन्य कार्यक्रमहरूका लागि समान स्वरूपमा सम्झौताहरू आउन बन्द भयो । यसैले उनी विचलित छिन् ।]
Prev१ लाख वर्षपछि मानिसको अनुहार…….यस्तो देखिनेछ…..!
Nextयी,,….९ बर्षका …..बालकले गाडी चलाउन..सिकाउछन् ….!